Ant-Man မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
10 / 01 / 2022 10 / 01 / 2022 Matt Yeo ပါ 91 Views စာ0မှတ်ချက် Shield ၏အေးဂျင့်, ပုရွက်ဆိတ်-Man, ပုရွက်ဆိတ်-Man နှင့် WASP, Ant-Man နှင့် Wasp: Quantumania, Disney+, Ghostbusters, hulk, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel ရုပ်ပြ, Marvel စတူဒီယို, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, အဆိုပါ Incredible Hulk, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ
Lego Marvel 76219 Ant-Man သည် 2022 ခုနှစ်အတွက် ကောလာဟလများ ထွက်ပေါ်နေသည်။
28 / 12 / 2021 29 / 12 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 110 Views စာ0မှတ်ချက် 2022, 76206 Iron Man ပုံ, ပုရွက်ဆိတ်-Man, Lego, Lego 2022, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ
LEGO အသစ်တစ်ခုအတွက်စာရင်း Marvel Ant-Man ကို အခြေခံသည့် မော်ဒယ်ဟု အကြံပြုထားသော set သည် အွန်လိုင်းတွင် တွေ့ရှိရသည်။
31 / 07 / 2021 31 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 548 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, ပုရွက်ဆိတ်-Man, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, lego coll ပါ, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Spider-Man, Marvel, ပတေရုသက Parker, Scarlet စုန်းမ, စကော့လန်း, Scarlet စုန်းမ, နောကျတှဲရထား, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
14 / 05 / 2021 14 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 1278 Views စာ0မှတ်ချက် 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer, 76189 Captain America နှင့် Hydra Face-Off, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, အမေဇုံ, ပုရွက်ဆိတ်-Man, Avengers: The Infinity Saga, Black က Panther, Captain America, Groot, Hydra အေးဂျင့်, Infinity Saga, သံမဏိလူသား, Lego, Lego Marvel, mantissa, Marvel, သြဗဒိသည်စတန်, ငရုတ်ကောင်း, ဒုံးပျံ raccoon, Scarlet စုန်းမ, Shuri, စတား-သခင်ဘုရား, Thanos, အဆိုပါ Infinity Saga
03 / 05 / 2021 03 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1024 Views စာ0မှတ်ချက် ပုရွက်ဆိတ်-Man, ပုရွက်ဆိတ်-Man နှင့် WASP, Ant-Man နှင့် Wasp: Quantumania, Black က Panther, အနက်ရောင် Panther II, ထာဝရက Black Panther Wakanda, နိစ္စထာဝရ, ရုပ်ရှင်, Lego, Lego Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, ရုပ်ရှင်တွေ, ထာဝရ, အဆိုပါ Marvels, အဆိုပါ WASP, Thor, Thor ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မိုးကြိုး
18 / 03 / 2021 18 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 1612 Views စာ0မှတ်ချက် ပုရွက်ဆိတ်-Man, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: Infinity Saga, Black ကမုဆိုးမ, Captain America, Captain America: The First Avenger, Hawkeye, hulk, သံမဏိလူသား, Lego, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Nebula, ကောလာဟလာ, အဆိုပါ LEGO Group, Valkyrie, စစ်ပွဲစက်
07 / 02 / 2021 08 / 02 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 954 Views စာ0မှတ်ချက် ပုရွက်ဆိတ်-Man, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Lego, Lego Marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Thor, Thor: Ragnarok, WandaVision
Marvel Black Panther၊ Fantastic Four နှင့် Ant-Man ရုပ်ရှင်အသစ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်
11 / 12 / 2020 11 / 12 / 2020 ခရစ် Wharfe 921 Views စာ0မှတ်ချက် ပုရွက်ဆိတ်-Man, Ant-Man နှင့် Wasp: Quantumania, Black က Panther, အနက်ရောင် Panther II, ကပ္ပတိန် Marvel 2, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Fantastic Four, Lego, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ 2, Marvel, Marvel စတူဒီယို, ဒေါ်။ Marvel, အဆင့် 4, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး, ဗွီဒီယိုဂိမ်း
Marvel Black Panther II, Fantastic Four နှင့် Ant-Man တို့ပါဝင်သည့် Phase4ဇာတ်ကားသစ်ကို Studios ကကြေငြာခဲ့သည်